नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १३५९ जनामा कोरोना संक्रमण, थप १४ जनाले ज्यान गुमाए – कर्णाली 24 डट कम
Karnali 24१९ भाद्र २०७७, शुक्रबार १६:५०
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १३ सय ५९ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।संक्रमितमा महिला ४६४ र पुरुष ८९५ रहेका छन् । यससँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या ४४ हजार २३६ पुगेको शुक्रबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । त्यस्तै आज १३ सय ५४ जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४५४ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । गौतमले काठमाडौंमा ३८६, ललितपुरमा ३२ र भक्तपुरमा ३६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए । यसअघि बिहीबार उपत्यकामा ४४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाभाइरसबाट थप १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मृतकमा महिला ४ र पुरुष १० जना रहेका छन् । शुक्रबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले थप १४ जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको कुल संख्या २७१ पुगेको जानकारी दिए ।
‘रंगेहात पक्राउ’ मा राज्यकै रकम घुस दिएर पक्राउ गर्नु गलत।
१ असार २०७८, मंगलवार ०८:३४
देउवा निवासमा रणनीति बुन्दै प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव
१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १२:५५
बिश्वकप फुटबल छनोट: नेपाल इराक बिरुद्ध खेल्दै।
४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १८:५७
पाेखरामा विद्यालयको पर्खाल भत्किएर एक जनाको मृत्यु
५ आश्विन २०७८, मंगलवार १२:५३
गायिका इन्दिरा जाेशिले काे संग गरिन् सुटुक्क इन्गेजमेन्ट? १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार १६:५०
चितवनमा माेटरसाईकल “ग्राहकको मागअनुसार ब्राण्ड, रङ्ग, मोडल खोजी खोजी चोरी १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार १६:५०
यस्तो हत्यारालाई के गर्नुपर्छ? ‘टाउको, घुँडाभन्दा तल र कम्मरभन्दा माथिको भाग अझै भेटिएको छैन्:प्रहरी १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार १६:५०